आफू पनि घरबाहिर ननिस्कनु, अरुलाई पनि घरमा आउन नदिनु - Enepalese.com
आफू पनि घरबाहिर ननिस्कनु, अरुलाई पनि घरमा आउन नदिनु
इनेप्लिज २०७६ चैत ११ गते १२:४५ मा प्रकाशित
लन्डन । कोरोना भाइरसका कारण अहिले विश्व त्रस्त छ । बेलायतमा मात्र यो पंक्ति तयार पारिरहँदा सो भाइरसका कारण ३३५ जनाको ज्यान गइसकेको छ भने ६ हजार ६५० मा सो भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ । हालसम्म यो भाइरसको उपचार पत्ता लागेको छैन तर यो रोग लाग्न नदिन विभिन्न उपायहरु चिकित्सक, वैज्ञानिक र सरकारले जारी गरेका छन् । ती उपायहरु र नेपालीहरुले कसरी सजगता अपनाउने सम्बन्धमा बेलायतको लिभरपूलमा कार्यरत जनरल प्राक्टिसनर (जीपी) तथा नेप्लिज डक्टर्स एसोसियशन युकेका सदस्य डा. मनोहर बुढाथोकीसंग नेपाल पत्रकार महासंघ बेलायतका अध्यक्ष नरेश खपांगीले गरेको कुराकानी :
अन्त्यमा बेलायतमा बसोबासरत नेपालीहरुलाई केही भन्नु चाहनुहुन्छ कि ?
(यो सामग्री कोरोना भाइरसबाट बेलायतमा रहेका नेपाली समुदायलाई सूचित र सचेत बनाउन नेपाल पत्रकार महासंघले चलाएको अभियान अन्तर्गत तयार पारिएको हो ।)